QM oo cambareysay is-hortaaggii DF ay ku sameysay Mahama | KEYDMEDIA ONLINE
QM oo cambareysay is-hortaaggii DF ay ku sameysay Mahama
Qaramada Midoobay ayaa walaac ka muujisay is hortaaggii ay dowladda Soomaaliya ku sameysay ergaygii gaarka ahaa ee Midowga Afrika usoo magacaabeen xaaladda Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wakiilka gaarka ah ee Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa ka hadlay fursadda hortaalla hoggaamiyeyaasha Soomaalida ee ku shirsan Magaalada Muqdisho xilli uu khudbad ka hor jeedinayay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey oo yeeshay shir gaar ah oo looga hadlayay arrimaha Soomaaliya.
Swan waxa uu tilmaamay walwalka laga qabo diidmadii ay dowladda Soomaaliya kaga hortimid ergaygii Midowga Afrika usoo magacawday Soomaaliya si xal looga gaaro doorashooyinka dib udhacay iyo rabshadihii xigay ee magaalada Muqdisho ka qarxay.
John Mahama ayaa loo diiday inuu guto howshii ay uxil saareen ururka Midowga Afrika ee dhexdhexaadinta Siyaasiyiinta Soomaalida ee isku haya doorashooyinka.
Swan ayaa yiri “Waxaan si weyn uga qoomameyneynaa go’aanka dowladda Soomaaliya ay ku diidday ergeygii Midowga Afrika usoo magacaawday Soomaaliya" ayuu yiri Mr. Swan oo ka hadlayay kulankii golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay.
John Mahama ergayga loo diiday inuu shaqeeyo ayaa ugu dambeyntii iska cisalay jagadii loo soo magacaabay ee ahayd ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan Midowga Afrika waddanka Soomaaliya.